दिव्य स्मृतिमा दिव्य खालिङ
मौलिक सिनेमा अझै बन्न बाँकी छ
महिला किसान : आलीदेखि थालीसम्म
१२ हजार फिटबाट हाम फाल्दा
कहिले होला परायापनको अन्त्य ?
मेरी क्युरी जसले दुईपटक नोबेल पुरस्कार जितिन्
पारिजात : मूर्त–अमूर्त समय संलाप
सगरमाथा सर्भेयरको ‘इन्साइड स्टोरी’
एकलव्यको भर्ना फारम
पर्यावरणको अन्तर्बोध दिलाउने कथा
गभर्नरको जाउलोले जिब्रो पोल्ने सरकार
‘काठमाडौं ट्रिएनाले’मा ४० देश, १३० कलाकार र तीन सय कलाकृति
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाली सिनेमा
माफी देऊ दुखिया बज्यै
मलाई एक अतिरिक्त कुरा थाहा भयो, ‘दाँतीबुढी बोक्सी हो !’ ६–७ वर्षको फुच्चेलाई ‘कसैले’ सुनायो, ‘त्यै बड्डीले आफ्नु पोइ खाई । तीन–तीन तन्नेरी छोरा गायब पारी ।’ त्यसपछि मेरो बालमस्तिष्कमा बहुरुपी कल्पना घुसे । म लोककथाको पारखी नहुँदो हुँ अनेक कल्पना ...
कतिन्जेल सहने अपमान ?
देश नटेकी बिदा भएका देशप्रेमी
डा. भगवान कोइरालालाई अमेरिकामा भेट्दा
युरोपको सपना पच्छ्याउँदै जाँदा
०७८ चैतको कुनै दिन धरम दास गहिरो निद्राबाट बिउँझदा उनलाई बान्ता आउलाझैँ भयो । कम्मरदेखि पैतालासम्म पीडाको शूल छुटिरहेको थियो । खुट्टा चल्मलाउनसमेत मुस्किल थियो । आफूलाई के भएको हो वा कसरी यस अस्पतालसम्म आइपुगेँ भन्ने उनलाई हेक्का ...
हङकङको त्यो ‘ट्याम्के’ पहाड
साइकल संस्कृतिको सौन्दर्य
नेपाली सिनेमा र रंगमञ्चमा स्थापित नाम हो, अनुप बराल । उनले रंगमञ्चमा नयाँ सीप र शैली भित्र्याएका छन् । उनका थुप्रै नाटक चर्चित छन् । उनले नेपालमा मात्र नभई विदेशमा पनि दर्जनौँ नाटक मञ्चन गरिसकेका छन् । अनुप ‘एक्टर्स ...
ओझेलमा डान्स डाइरेक्टर
चलचित्रको नाममा हिमालीको अपमान
क्रिस्टियन प्यारेन्टी वरिष्ठ अमेरिकी पत्रकार हुन् । उनको यो चर्चित लेख ‘सोसियल जस्टिस’ जर्नलमा सन् २००१ मा प्रकाशित भएको थियो । उनी लेखमा २० वर्षअघि विस्थापित तालिबान र हाल पुनस्र्थापित तालिबान दुवै अमेरिकी जिहादकै परिणाम हुन् भन्छन् । ...
अफ्रिकाविना जी–२० अपूरो छ
हकिन्सले हिम्मत हारेको भए !
इजिप्टले मरुभूमिमा किन बनाउँदै छ नयाँ राजधानी ?
म जस्तो महान् नेतालाई पद भन्ने जिनिस ठूलो कुरा हैन !